सबै गुगल खेलहरु, पौराणिक डायनासोर सहित | मोबाइल फोरम
क्रिस्टियन गार्सिया | 10/10/2021 17:13 | अद्यावधिक गरियो 10/10/2021 17:15 | गुगल क्रोम
के तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि केवल प्रसिद्ध गुगल डायनासोर अस्तित्व मा छ? खैर होईन, खोज ईन्जिन जुन इन्टरनेट ब्राउजर को सबै शुरुआत संग बनाइएको छ कि हामी हाम्रो पीसी मा छ गुगल खेल को एक चयन हो कि धेरै मानिसहरु को बारे मा थाहा छैन। तर हामी गर्छौं, र हामी तपाइँलाई उनीहरुको खेल को बारे मा बताउन जाँदैछौं ताकि यदि तपाइँ कहिल्यै बोर हुनुभयो, तपाइँ उनीहरुलाई एक प्रयास दिन सक्नुहुन्छ। तपाइँ उनीहरु दुबै खोज ईन्जिन बाट र डूडल बाट पाउन सक्नुहुन्छ र तपाइँ दुबै तपाइँको पीसी बाट र तपाइँको मोबाइल फोन बाट खेल्न सक्नुहुन्छ।
सबै भन्दा राम्रो बच्चाहरु को खेल अनलाइन, सुरक्षित र नि: शुल्क
हामी तपाइँलाई बुझाउन जाँदैछौं कसरी यी गुगल खेलहरु सजिलो तरीकाले खेल्ने र हामी तपाइँलाई बताउनेछौं कि उनीहरु मध्ये प्रत्येक को बारे मा के हो ताकि यदि तपाइँ यो जस्तै महसुस गर्नुहुन्छ, तपाइँ भित्र जान सक्नुहुन्छ र कुनै पनि समय केहि खेल खेल्न सक्नुहुन्छ। किनकि कलेज वा काम मा गुगल डायनासोर खेलेका छैनन् किनकि उनी पूर्ण रूपमा बोर थिए! ठीक छ अब तपाइँ जान्न जाँदै हुनुहुन्छ कि त्यहाँ धेरै अन्य धेरै बाहिर छन्, डायनासोर एक्लो छैन। त्यस कारणको लागी, र किनकि हामी सबै गेमर हौं र बोरियत को क्षणहरुमा धेरै, हामी त्यहाँ गूगल सित्तैमा प्रदान गर्ने खेलहरुको सूची संग जान्छौं।
1 खोज ईन्जिन बाट नै पूर्ण रूपमा नि: शुल्क Google खेलहरु
1.3 प्याक म्यान
1.5 Zerg रश
1.7 एउटा सिक्का फ्याँक्नुहोस्
1.8 गुगल क्लाउड
खोज ईन्जिन बाट नै पूर्ण रूपमा नि: शुल्क Google खेलहरु
हामी भन्यौं, यी भिडियो गेमहरु तपाइँ मात्र प्रदर्शन गर्न को लागी पाउन को लागी सक्षम हुन को लागी गुगलको आफ्नै खोज इन्जिन मा एक साधारण खोज। जतिसक्दो चाँडो तपाइँ भिडियो खेल को नाम र गूगल को पछाडि यो गूगल प्ले को रूप मा सूचीबद्ध देखिनेछ, जुन तपाइँ गुगल प्ले स्टोर संग भ्रमित हुनुहुन्न, किनकि यो पनी देखिनेछ कि यो कम्पनी बाट नै हो।
उनीहरुलाई खेल्ने अर्को तरीका सर्च इन्जिन मा गुगल खेलहरु लेख्नु हो। एक आधिकारिक गुगल वेब पेज देखा पर्नेछ जहाँ तपाइँ देख्नुहुनेछ कि त्यहाँ एक विकल्प छ कि तपाइँलाई अर्को पृष्ठमा लैजान्छ। यसमा तपाइँ उसको सबै डूडल देख्न सक्नुहुन्छ र तपाइँ उसका सबै खेलहरु पनि पाउनुहुनेछ। तेसैले तपाइँ पहिले नै पहुँच को लागी बिभिन्न तरीकाहरु थाहा छ। एक सीधा र गहिराई मा एक अधिक, यो तपाइँको भीड र बोरियत मा निर्भर गर्दछ, तपाइँ एक वा अर्को खोज इन्जिन द्वारा प्रस्तावित खेलहरु लाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रम विन्डोज मा खेल अनुकूलन गर्न
त्यहाँ धेरै धेरै छैन विधि को बारे मा बताउन को लागी उनीहरु लाई खोज्न को लागी यो छ ठ्याक्कै उस्तै यदि तपाइँ एक मोबाइल उपकरण वा एक पीसी वा ल्यापटप प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, तेसैले, हामी त्यहाँ नि: शुल्क खेलहरु को सूची संग जान्छौं कि तपाइँ प्रसिद्ध गुगल खोज इन्जिन मा पाउनुहुनेछ।
एउटा सिक्का फ्याँक्नुहोस्
यी को अतिरिक्त, जो फिक्स्डहरु हुन् र अब हामी उनीहरु कसरी छन्, यो छ भनेर व्याख्या गर्नेछौं मौसमी डूडल द्वारा अन्य विशेष जुन उनीहरुको वेबसाइट मा उपलब्ध हुन सक्छ कि हामीले माथि उल्लेख गरेका छौं। यी खेलहरु निम्नानुसार छन्:
मातृ दिवस २
जादू बिरालो एकेडेमी
ग्रेट घोल डुएल
बास्केटबल २ 2012
स्लालम २०१२ मा क्यानोइ
५० औं वार्षिकोत्सव डाक्टर को
पोनी एक्सप्रेस को १५५ औं वार्षिकोत्सव
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, खोज इन्जिन को विकासकर्ताहरु सामान्यतया एक फरक दिन वा एक पात्रो मा संकेत एक को लागी विशेष चीजहरु गर्न। तर अब, हामी तपाइँलाई बुझाउन गइरहेका छौं कि प्रत्येक खेलहरु जुन गुगल खेल को शीर्षक टीम मा छन् को बारे मा छ। ती मध्ये धेरै तपाइँ पहिले नै थाहा पाउनुहुनेछ कि उनीहरु के बारे मा छन् किनकि उनीहरु क्लासिक खेलहरु हुन्, पत्र को केहि पनि। अन्य धेरै क्लासिक नहुन सक्छ, यही कारण हो, चलो यसको साथ जाने।
तपाइँ एक्लो देखी प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ एक्लो: Google मा। यो एक जीवनकाल को क्लासिक कार्ड खेल हो कि तपाइँ पनि तपाइँको पीसी मा उपलब्ध छ। भिडियो खेल तपाईं को लागी दुई स्तरहरु छन्, सजिलो र गाह्रो। के मा विन्डोज त्यागी बाट फरक छ यदि तपाइँ सोचिरहनु भएको छ कि मँ गूगल को उपयोग गर्न को लागी जाँदैछु र मेरो पीसी को होईन, यो हो कि त्यहाँ उनीहरु मा डबल क्लिक गरेर कार्ड राख्न को लागी कुनै सर्टकट छैन, तपाइँ उनीहरुलाई तान्नु पर्छ जहाँ तपाइँ चाहानुहुन्छ। उनीहरुलाई छोड। तपाइँ ब्राउजर बाट गुगल त्यागी खेल्न सक्नुहुन्छ, यसैले तपाइँ तपाइँको मोबाइल फोन बाट प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाइँ पनि चाहानुहुन्छ।
यो खेल तपाइँ यसलाई खोज्न पाउनुहुनेछ टिक टीएसी को औंला: खोज इन्जिन मा। यो एक जीवनकाल को अर्को क्लासिक हो। तपाइँलाई कठिनाई को स्तर र पहिलो विकल्प हो कि यो तपाइँ लाई प्रदान गर्दछ कि Xs वा ओ संग खेल्ने होईन। तब तपाइँ मेशिन लाई हराउन को लागी थिच्नु पर्छ। अघिल्लो एक जस्तै, तपाइँ पनि समस्या बिना तपाइँको मोबाइल फोन बाट खेल्न सक्नुहुन्छ।
यस्तो लाग्छ कि हामी अर्को युग बाट क्लासिक्स संग जारी छ। पीएसी म्यान खेल्न तपाइँ शब्दहरु पीएसी मैन को उपयोग गर्न को लागी हुनेछ: Google मा। यो क्लासिक भिडियो खेल हो कि एक युग, एक प्रतिमा चिह्नित छ। तपाइँ माथि, तल, दायाँ र बायाँ तीर को उपयोग गरेर तपाइँको कीबोर्ड संग खेल्न सक्नुहुन्छ। अघिल्लो एक जस्तै, तपाइँ पनि समस्या बिना तपाइँको मोबाइल फोन बाट खेल्न सक्नुहुन्छ। यस अवस्थामा तपाइँ तपाइँको औंला को साइड मा तपाइँ जान चाहानुहुन्छ स्लाइड गर्न को लागी हुनेछ।
प्रसिद्ध पुरानो नोकिया भिडियो खेल पनि गुगल मा उपस्थित छ। तपाइँ सर्प खोजेर यो पाउन सक्नुहुन्छ:। भिडियो खेल स्याउ खाने र सर्प लामो र लामो हुँदै र बाधाहरु बाट बच्न असमर्थ छ कि जब सम्म उनीहरु तपाइँलाई मार्दैनन्। एक लत भिडियो खेल। अघिल्लो एक जस्तै, तपाइँ पनि समस्या बिना तपाइँको मोबाइल फोन बाट खेल्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ पनि तपाइँको औंला स्लाइड गर्न को लागी हुनेछ।
तपाइँ यसलाई पाउन सक्नुहुन्छ Zerg रश खोज को उपयोग गरेर:। भिडियो खेल देखाउँछ कि गुगल को पत्र ओ संग बिभिन्न सर्कल ब्राउजर मा अग्रिम जाँदैछन् र तपाइँ उनीहरुलाई मार्न को लागी क्लिक गर्नु पर्छ। अघिल्लो एक जस्तै, तपाइँ पनि समस्या बिना तपाइँको मोबाइल फोन बाट खेल्न सक्नुहुन्छ।
यो प्रविष्ट गर्न को लागी तपाइँ खोज गर्नु पर्छ अटारी ब्रेकआउट:, तर यो समय गुगल छवि सेक्सन बाट। तपाइँ एक बल एस्केप र बाउन्स बिना ब्लक तोड्नु पर्छ। यस अवस्थामा तपाइँ मात्र पीसी मा खेल्न सक्नुहुन्छ।
यो पाउन को लागी तपाइँले गर्नु पर्छ एक सिक्का फ्लिप गर्नुहोस्। होइन कि यो जस्तै एक खेल हो, तर यो एक साथी संग केहि निर्णय गर्न ठीक छ। तपाइँ मात्र एक सिक्का फ्लिप र यो टाउको वा पुच्छर आउनेछ।
यो पाउन को लागी तपाइँले गर्नु पर्छ Google मोबाइल अनुप्रयोग पहुँच गर्नुहोस्। एक पटक तपाइँ भित्र हुनुहुन्छ तपाइँ एक हवाई जहाज मोड राख्नु पर्छ र एक जडान छैन। एक पटक तपाइँ गुगल अनुप्रयोग मा केहि को लागी खोज, तपाइँ भिडियो खेल संग एक बुलबुला देख्नुहुनेछ। एक बरु अजीब खेल तर यसको रहस्य को लागी कोशिश लायक।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » इन्टरनेट » गुगल क्रोम » सबै गुगल खेलहरु, पौराणिक डायनासोर सहित